Best Hotels Near Train Stations In Italia | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby any Italia > Best Hotels Near Train Stations In Italia
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 30/10/2020)
Italia, Eoropa iray amin'ireo malaza indrindra vakansy toerana, izany rehetra izany dia manana. Ny manan-karena ara-kolontsaina tantara, tarehy trano fandraisam-bahiny, izao tontolo izao-malaza nahandro, maritrano, toerana voajanahary tsara tarehy ... ary avy eo misy fiantsenana! Nankany Italia lamasinina dia mahatalanjona traikefa. Mahazo hankafy ny rehetra tsara tarehy toerana manodidina teny an-dalana fa tsy dozing eny amin'ny fiaramanidina. Rehefa tonga ny tanàna voafidy, misy alinalina toerana tsara tarehy hijanona. Mba hahatonga ny diany mety kokoa, dia efa boribory ny sasany tena-laharana Hotels - ny tsirairay amin'izy ireo fotsiny mitora-bato avy amin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby. Ireo no tsara indrindra Hotels near gara any Italia.
Ny voalohany tsara indrindra Hotels near gara any Italia dia – Firenze Santa Maria Novella Train Station in Florence
Ny Grand Hotel Minerva fotsiny avy any Florence 300m ny Santa Maria Novella Train Station. Trano fandraisam-bahiny io daty manan-tantara indray ny 19faha Taonjato ary manana tampon-trano lavarangana tazana ny manan-tantara ivon'ny Italia Renaissance tanàna, Florence.
Ity trano fandraisam-bahiny safidy no tonga lafatra ho an'ny mpandeha liana amin'ny zavakanto, kolontsaina, ary sakafo. Izany minitra vitsy avy toerana lehibe rehetra. Azonao atao ny mahita ny Santa Maria Novella ivelan'ny tsara ny varavarana fidirana, Ary ao anatin'ny iray monja kilometatra, ianao koa dia afaka mitsidika ny Florence Cathedral, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio sy Pitti Palace.
Mitady sasany fiantsenana na manaikitra hihinana? Makà hoe nandeha ho any San Lorenzo tsena na Sant'Ambrogio tsena, ary ho azo antoka hitsidika Buca Maria na Gelateria La Carraia ho sakafo.
Milan Porta Garibaldi Train Station in Milan
Fashion dia ny anaran 'ny lalao any Milan - ka izay tsara mba hijanona noho ny falehan'ny olona Tocq Hotel? Ny trano fandraisam-bahiny no misy ao afovoan'i Milan, ka ny Via malaza Montenapoleone, Castello Sforzesco sy La Scala Theater rehetra ao anatin'ny 2km nipoaka, fanaovana ny zavatra hita mora foana walkable. Ny Duomo Milan ihany koa teo akaiky teo, fotsiny ny 2km lasa.
Ianao no te-hivoaka ho tia ny mampientam-po nightlife ny malaza Corso Como eny an-dalambe, miorina fotsiny 100 metatra miala. Mazava ho azy, Corso Como ihany koa feno olona tao Jerosalema amin'ny andro - miaraka amin'ny valahana trano fisotroana ary ny trano fandihizana, vibey ity ihany koa ny mpandeha an-tongotra eny an-dalana mirehareha avo lamaody fivarotana sy Gourmet trano fisakafoanana. Tsy nanao miantsena? Tsy manome tsiny anao! Omeo lalana Via Vincenzo Capelli sy ny distrika Brera ny fitsidihana.
Trano fandraisam-bahiny tsara indrindra akaikin'ny gara any Italia – Naples – Central Train Station
Ny trano fandraisam-bahiny tsara indrindra farany akaikin'ny gara any Italia no Ny UNA Hotel Napoli, ara-tantara indray ny authentically tandrifin'ny trano miorina amin'ny foibe fiantsonan'ny fiaran-dalamby any Naples. Mankafy ny zava-pisotro tao amin'ny trano fandraisam-bahiny toeram lavarangana, izay manana fijery ny Vésuve volkano. Raha manapa-kevitra ny hahazo kely akaiky kokoa izany fijery, dia afaka maka fohy mitaingina fiaran-dalamby hahita Pompei sy ny Volkano Vésuve.
Maro loatra ny toerana ara-tantara tsy mampino teo akaiky teo, ka ho Naples ny nijanona intsony raha atao. Ianao ho afaka ny handeha ho any amin'ny Cathedral ny Naples, Santa Chiara, San Gregorio Armeno, San Lorenzo Maggiore, National Archaeological Museum, ary koa ny lalana ao an-Duomo afovoan-tanàna manan-tantara. Azonao atao mihitsy aza mandeha eo ambanin'ny tanàna ity no Napoli Sotterranea.
Train Station Roma Termini any Roma
Ny NH Collection Roma Palazzo Cinquecento mahafinaritra dia hatsaran-tarehy kintana 5 izay manakaiky ny gara lehibe indrindra any Roma ary misy ny fahitana ny zaridaina sy ny sisa tavela amin'i Mura Serviane. Raha te trandrahana ny tanàna mandrakizay an-tongotra, ianao in vintana. Azonao atao ny loha tsy mahazo manao izany maro manintona akaiky kokoa izy noho ny 2km: ny Coliseum, Zavatra Dingana, Dobo Trevi, National Museum an'i Roma, Teatro dell'Opera di Roma, Santa Maria Maggiore, Fiangonana Santa izao no fanontanian'i susanna, ary ny Espaniola Dingana.
Raha toa ka tsy reraka loatra izany rehetra izany hizaha, mitsambikina amin'ny fiara fitateram-bahoaka an-tanàna ho any an-drenivohitra ny malaza Via do Corso izay mirehareha miantsena amin'ny antoandro sy ny toeram-pisakafoanana, trano fisotroana sy langilangy alina. Izahay antoka ianao tia ny hijanona any akory va ny tsara indrindra akaikin'ny gara Hotels in Italia.
Efa nitsidika misy eo anoloan'ny? Aoka isika hahafantatra amin'ny alalan'ny nibitsika antsika amin'ny @SaveATrain! Any fanontaniana? Mifandraisa aminay amin'ny SaveATrain.com Ary raha ve ianao mila mahita ny tsara indrindra Hotels near gara, kitiho eto.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-hotels-near-train-stations-in-italy/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / izany / de na / fanononana kokoa fiteny.